LALANA “ROCADE D’IARIVO”: Marolafy ireo trangana tsy fanarahan-dalàna mbola hita – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:37
Mitohy ny fampanarahan-dalàna ataon'ny Polisim-pirenena.
Accueil/Songadim-baovao/LALANA “ROCADE D’IARIVO”: Marolafy ireo trangana tsy fanarahan-dalàna mbola hita
LALANA “ROCADE D’IARIVO”: Marolafy ireo trangana tsy fanarahan-dalàna mbola hita
Folo andro taty aorian’ny nitokanana sy nanokafana ny “Rocade d’Iarivo” ho ampiasain’ny daholobe, miseho amin’ny endrika isankarazany ireo trangana tsy fanarahan-dalàna hita eny amin’ity lalam-baovao ity. Mbola misy hatrany ireo sarety mandeha, ireo fiara mijanona na tonga hitsangatsangana mihitsy, ireo mivarotra eny an-tsisin-dalana. Noho izany, manamafy ny fanentanana hatrany ny avy amin’ny Fanjakana hisorohana ny loza sy ny gaboraraka.
Lucien R. 5 juillet 2021
Lalana vaovao natao hamahana ny olan’ny fitohanan’ny fiara eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny “Rocade d’Iarivo”. Misy, noho izany, ireo fepetra maro samihafa tsy maintsy hajaina amin’ny fampiasana ity lalana ity. Andro maromaro taty aorian’ny fisokafan’izany ho azon’ny daholobe ampiasaina anefa, mbola miseho amin’ny endriny maro isankarazany ireo tsy fanarahan-dalàna hita eny amin’ity lalam-baovao ity. Ho an’ny omaly maraina fotsiny, araka ny tatitry ny Polisim-pirenena, sarety miisa 12 no voatery naverin-dalana. Fiara mijanona amoron-dalana miisa 06 koa no nalefa nandeha, ary mpitondra bisikileta miisa 10 no nasaina namonjy ny toerana voatokana azy ireo. Etsy ankilany anefa, misy koa ireo olona mikasa hivarotra amoron-dalana no nobeazina tsy hanao izany fa hitady toerana hafa voatokana amin’izany. Eo anatrehan’izany, mitohy hatrany ny fanentanana ataon’ny Polisy ho an’ireo olona tsy manara-dalàna mampiasa iny lalam-baovao eny amin’ny rocade iny. Tanjona ny hisorohana ny lozam-pifamoivoizana tsy hitranga ary koa hitandroana ny fotodrafitrasa tsy ho simba sy haloto.
Fanentanana nanomboka ny zoma teo
Ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy ny gaboraraka izay indrindra, misy asa fanentanana ataon’ny avy amin’ny Fitondram-panjakana nanomboka ny zoma teo, izay eo ambany fitarihan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. Miara-misalahy amin’izany kosa ny Minisiteran’ny Fitaterana, ny Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ary ny Kaominina Ambohimangakely. Mandeha ao amin’ny Haino aman-jerim-panjakana RNM sy TVM ity fanentanana ity, izay miompana amin’ny fanabeazana olom-pirenena vanona. Misy koa ny torolalana amin’ny fomba fampiasana ny “rocade”, ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao. Voaresaka betsaka amin’izany ny tsy fahazoan’ny sarety mandeha amin’iny lalana vaovao iny, ary koa ny tsy fahazoan’ny fiara mijanona amin’izany lalana izany, sy ny sisa hafa koa
“CLEAN UP DAY” KOPAKELATRA: Tavoahangy plastika 400kg mahery voaangona
7 FEBROARY 2009 – 12 TAONA ATY AORIANA: Efa nampamono olona, mbola mikasa hanao sorona indray ?
ANDRO ERAN-TANY HO AN’I AFRIKA: Nisongadina ny fampiroboroboana ny Kolontsaina sy ny Vakoka eto amintsika
FITAKIANA IREO NOSY MALAGASY: Manamafy ny fanohanany an’i Madagasikara ny SADC